मलेसियाको सामसुङले कामदारलाई अब बेसिक RM १७ सय दिने ? - jagritikhabar.com
मलेसियाको सामसुङले कामदारलाई अब बेसिक RM १७ सय दिने ?
मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एक घन्टाको यात्रापछि पोर्ट केलाङमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सामसुङ मलेसिया कम्पनीले कामदारलाई उत्कृष्ट सुबिधा दिने कम्पनीमा परेको छ ।
सामसुङ मलेसिया कम्पनीले २०२२ जनवरी देखिको महिना देखिकै लागू हुनेगरी बेसिक तलब १७ सय पुराएको छ ।
यो घोषणा संगै अन्य कम्पनीलाई अब बेसिक तलब १४ सय बनाउनै पर्ने दबाब सृजना भएको छ भने अन्य ठुला कम्पनीलाई पनि तलब सुबिधा बढाउन दबाब आएको छ ।
सेवा सुबिधा र बेसिक तलब मापनको मामिलामा पहिलो कम्पनी बनेको छ । अन्य कम्पनीले १२ सय बेसिक तलब दिने गरेकोमा दुई चार वटा कम्पनिले मात्रै सरकारले तोकेको बेसिल तलब दिएका छन् ।
मलेसियामा रहेको सामसुङको फ्याक्ट्रीमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार काम गर्दै आएको मलेसियामै रहेका एक नेपालीले बताए ।
कामको मामिलामा थोरै गाह्रो भए पनि तलब र अन्य सेवा सुबिधा राम्रो मानिन्छ सामसुङ मलेसियामा ।
स्थानीय समाचार संस्थाले जनाए अनुसार मलेसियामा सबैभन्दा धेरै बेसिक तलब दिने पहिलो कम्पनी नै सामसुङ रहेको जनाएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही भएको भन्दै मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र परीक्षण अनुमति दिने भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीमा स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका अरु सबै प्रक्रिया निःशुल्क हुने र त्यसको खर्च मलेसियाका रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।